Waraqaalee ragaa - Sheer Itiyoophiyaa
Sheer Itiyoophiyaan hojjettoota isaatif haalotii hojii gaarii mirkaneessaa angooxoowwan isaa karaa walirraa hincitiniin omishuu isaatin ittiin ni boona. Omisha, adeemsawwanii fi haalotiin keenya qaamolee mirkaaneessitoota adda addaatin to’annaan godhameefii waraqaan ragaa (mirkaneessi) kennamaaf.
EHPEA Raawwii hojii Meetii
EHPEA Raawwii hojii Warqee
Yoo waraqaalee ragaa (isa tokko) ilaaluu barbaaddan, karaa liikii kanaan gadiitin argachuu dandeessu:
Maasiiwwan keenya ulaagaalee daldala sirrii adda addaa, omisha naannoo waliin wal simataa ta’ee fi jireenya bu’aa qabeessa fi haalotii hojii hojjettootaaf kan guutuu dha. Angooxoowwan sadarkaa daldala sirrii jalatti gurguramaniif warri bitan kaffaltii irratti maallaqa hamma ta’e dabalanii kaffalu. Maallaqni gatii idilee irratti dabalamee kaffalamu kun gareen isaa piroojektoota hawaasummaa kanneen akka hospitaala fi manneen barnootaa Sheer Itiyoophiyaatif kan oolanii dha. Inni dabalataanis baajata kaffaltii koree daldala sirriitif naqaalee nyaataa fi leenjii kennamuuf kan gumaacha godhu dha. Kanaafuu warri bittuu Awurooppaa keessaa jireenya fooyya’aa Itiyoophiyaatif gumaachuu danda’u jechuu dha. Waliigaltee sadarkaa qulqullinaa daldala sirrii waliin taasifameef Sheeriin waggaa waggaatti ni to’atama.
MPS- Ga'umsa hawaasummaa ni qaba
Haalootiin hojii gaarii daldaltoota fi bittoota baay’ee ta’aniif ga’ee guddaa kan taphatuu dha. MPS-Waraqaa ragaa ga’umsa hawaasummaa qabaachuun isaa ulaagaalee waliigalteewwan Addunyaalessaa kanneen akka fayyaa fi eeggannoo ni agarsiisa.
MPS-ABC Meeshaa to’annaa Kaampaaniiwwan tarkaanfiilee mijataa hojiirra oolchuun miidhaa naannoo irra ga’uu malu akka hir’isan agarsiisu dha. MPS-ABC Carraaqqiin yaaliiwwan walitti fufiinsaan taasifaman ifa kan ta’anii fi kan safaramuu danda’anii dha. Innis waraqaa ragaa addunyaa irratti beekkamtii qabu kan galmeessa dijitaalaa irratti hundaa’ee meeshaalee omisha midhaanii hittisan, anniisaa, xaa’oowwan, bishaan, fi kosii/xurii irratti kan hojjetuu dha. MPS-A Dandeettiin nuti badhaafamne kun Naannoo dammaqinaan misoomsuu waliin kan wal fakkaatuu dha.
MPS-GAP (Good Agricultural Practice) Muuxnnoo qonna gaarii
MPS-GAP sagantaa ragaa ba’uu Kannee akka walqabatee deemuu, naannoo, eeggannoo, fi qulqullinaa hammatuu dha. MPS-GAP irkataa Global GAP kan ta’e, jechuunis GGN (Lakkoofsi Global GAP )battaluma waraqaan ragaa fudhatameen kan ramadamuufii dha. Lakkoofsi kunis Daataabeezii GlobalGAP irratti kan mul’atuu dha.
GRASP (Global GAP Risk Assessment on Social Practice) Waraqaa ragaa amma jiru MPS GAP irratti dabalata kan ta’ee dha. Muraan GRASP kaampaaniiwwan ulaagaalee hedduu kanneen akka bakka humna namaa fi taliigaa peeroolii, iddoo ciisichaa fi hojiilee qaama alaatif dabarsanii kennuu kan fakkaatan kan nqoratuu dha. is an addition to the current MPS GAP certificate.
ETI (Ethical Trading Initiative) Kaka'umsaa mala gaarii daldalaa
Irra caalaatti ETI gabaa UK dhaaf kan qophaa’e dha. Karaa biraatin immoo biyyoota hundaafuu mijataa kan ta’ee fi deeggarsa Addunyaalessaa ball’aa mit mootummoota fi yuuniyenoota daldalaa irraa kan qabuu dha. “ETI Base Code” MPS-Socially Qualified waliin waan walfakkaatu baay’ee qaba, garuu xiyyeeffannaa irra caalu kan godhu warra angooxoo jilmaadhan gurguranii fi kaampaaniiwwan dhiyeessan irratti dha.
EHPEA Raawwii hojii Sadarkaa Meeti
Asxaan waldaa omishtoota gara biyya alaatti ergitoota qonna angooxoo Itiyoophiyaa kun hujeeffama naannoo fi hawaasummaa michooma ergitoota angooxoo, kutuu fi kuduraalee Itiyoophiyaa keessatti kan to’atuu dha. Raawwiin hojii EHPEA sadarkaalee sadi qaba: Naahaasii, Meetii fi Warqee. Raawwii hojii sadarkaa meetii international Global GAP kan angooxoo fi faayaalee jedhamu waliin walqixa kan ta’ee dha. Control Union Certification (CUC) To’annaa fi mirkaneessa walabaawaa yeroo yeroo mirkaneeffamutti kan raawwatuu dha.
EHPEA Raawwii hojii Sadarkaa Warqee
Raawwii hojii sadarkaa meetiidhan yoo waliin ilaalamu, sadarkaan warqee gochaalee dabalataa fi gamtoomina hawaasa naannoo sana fi seektara qonna angooxoo waliinii kan gaafatuu dha. Sheer Itiyoophiyaan 2014 irraa kaasee sadarkaa warqee irra ga’ee jira.
Geggeessaa walii galtee
Read all about Haalota qacarrii
Read all about Imaammata waliigaltee farra malaammaltummaa